လကျဆှဲနှုတျဆကျခှငျ့မရတဲ့ စငျကာပူ ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျလှုပျရှားမှု - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျတာတှေ လုပျလို့မရတော့
နိုငျငံရေးသမားတှအေတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလ ဆိုတာဟာ ပွညျသူလူထုနဲ့ နီးနီးကပျကပျရှိတဲ့ အခြိနျအနညျးငယျထဲက အခြိနျကာလ တဈခု ဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ လူတှကေ သူတို့ကို မဲပေးကွဖို့ကိုလညျး သူတို့က ဆှဲဆောငျ စညျးရုံးရပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ အရာအားလုံးကို ပွောငျးလဲစခေဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ကပျဘေးရောဂါကွီးက ရှေးကောကျပှဲတှနေဲ့ ပတျသကျတာတှကေိုလညျး အပွောငျးအလဲ ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
နိုငျငံရေး မဲဆှယျလှုပျရှားမှုတှကေို အှနျလိုငျးကပဲ လုပျ ၊ တဈအိမျတကျဆငျး မဲဆှယျတဲ့နရောမှာ ခပျခှာခှာ စညျးမဉျြးတှကေို လိုကျနာ၊ လကျဆှဲနှုတျဆကျရမယျ့အစား အခွားနညျးနဲ့ နှုတျဆကျတာတှကေိုပဲ လုပျရမယျ့ အခွအေနေ ရောကျလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီတဈပတျ ဇူလိုငျ ၁၀ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ စငျကာပူအထှထှေရှေေးကောကျပှဲကလညျး အထကျမှာ ပွောတဲ့ အခွအေနတှေေ အောကျမှာ ကငျြးပဖို့ ဖွဈလာပါပွီ။
ရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှနေထေိုငျတဲ့ အိပျဆောငျတှကေနေ ကူးစကျပြံ့ပှားမှု အမြားဆုံးဖွဈနပွေီး၊ ဗိုငျးရပျဈရောဂါပိုး ကူးစကျခံထားရသူ လေးသောငျး လေးထောငျကြျောရှိနတေဲ့စငျကာပူမှာ လာမယျ့ သောကွာနကွေ့ရငျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ကငျြးပတော့မှာပါ။
ဒီလအစောပိုငျးက စငျကာပူမှာ လော့‌‌‌ဒေါငျးကို တဈစိတျတဈပိုငျး လြှော့ခထြားပမေယျ့ ခပျခှာခှာ နရေမယျ့ စညျးမဉျြးတှကေိုတော့ ဆကျပွီး ထုတျပွနျထားဆဲပါ။ လူတှတေ‌ဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တဈမီတာ အနညျးဆုံးခှာနခေိုငျးထားပွီး ၊ လူစုလူဝေးနဲ့ တှဆေုံ့မှုတှကေိုလညျး ပိတျပငျထား ဆဲဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ကပျရောဂါကွီးကွားက မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှေ ဘယျလိုလုပျနကွေပါသလဲ။
‌ရှေးကောကျပှဲဝငျမယျ့ အမတျလောငျးတှအေတှကျ သူတို့ပေးခငျြတဲ့ သတငျးစကားတှေ ပေးနိုငျဖို့ လူထု တှဆေုံ့စညျးဝေးပှဲတှေ လုပျတာက မဲဆှယျ စညျးရုံးလှုပျရှားမှုရဲ့ အသကျသှေးကွော ဖွဈပါတယျ။
အတိုကျအခံပါတီ ၁၂ပါတီထဲက ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက စပွီးထူထောငျခဲ့တဲ့ စငျကာပူ ပွညျသူ့တိုးတကျရေး ပါတီ (ပီအကျဈပီ)ကလညျး ဒီနှဈ ရှေးကောကျပှဲကနေ ရလဒျကောငျးတှေ ရလာဖို့ မြှျောလငျ့နပေါတယျ။
ဒါပမေဲ့ စငျကာပူ လှတျလပျရေးရတဲ့ ၁၉၆၅ခုနှဈကတညျးက ဆကျတိုကျ အနိုငျရ အုပျခြုပျလာတဲ့ ပွညျသူ့ လှုပျရှားမှုပါတီ (ပီအပေီ) ကိုတော့ သူတို့အနနေဲ့ ယှဉျနိုငျဖို့ သိပျမလှယျပါဘူး။
လူကိုယျတိုငျ တှဆေုံ့နိုငျတဲ့ မဲဆှယျပှဲတှကေို ဒီနှဈ ရှေးကောကျပှဲမှာ လုပျခှငျ့မရတာက သူတို့အတှကျ ထိခိုကျမှုတှေ အမြားကွီးဖွဈစသေလို ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကွီး ကွားမှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပတာကလညျး "လူတှအေတှကျ အန်တရာယျရှိတယျ" လို့ ပီအကျဈပီ ပါတီဝငျ တဈယောကျက ပွောပါတယျ။
. "အတိုကျအခံတှရေဲ့ မဲဆှယျပှဲတှကေ လူတှကေို မကျလုံးကွီးကွီးပေးပွီး မဲဆှယျကွတာ၊လူတှေ အမြားကွီး လာတကျကွသလို ပွောငျးလဲမှုတှကေိုလညျး အမြားကွီးဖနျတီးပေးပါတယျ" လို့ လီရှနျယနျး က ဘီဘီစီကိုပွောပါတယျ။
"ဒီရှေးကောကျပှဲမှာ လူထုမဲဆှယျပှဲတှေ လုပျခှငျ့မရတာက အတိုကျအခံတှကေို နဈနာစတေယျ" လို့ လညျး စငျကာပူဝနျကွီးခြုပျနဲ့ ပီအပေီပါတီရဲ့ခေါငျးဆောငျ လီရှနျလှနျးရဲ့ညီ လီရှနျယနျးက ထပျဖွညျ့ပွောပါတယျ။
၂၀၁၅ခုနှဈမှာ လုပျခဲ့တဲ့ အတိုကျအခံ မဲဆှယျပှဲတဈခုမှာဆိုရငျ ခနျ့မှနျးခွေ လူသုံးသောငျးလောကျ တကျခဲ့တာကွောငျ့ စငျကာပူ လူဦးရေ ငါးသနျးနဲ့ယှဉျကွညျ့ရငျ မြားပွားတဲ့ ပမာဏလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာနဲ့ အှနျလိုငျး ပလကျဖောငျးကိုပဲ အကွီးအကယျြ အားကိုးနရေတာ ဖွဈလို့ အခှငျ့အရေး ညီတူမြှတူ ရစတေယျလို့ ပီအပေီပါတီက လှတျတျော အမတျတဈယောကျကပွောပါတယျ။
ပီအပေီပါတီက စငျကာပူကို လှတျလပျရေးရပွီးကတညျးက ဆကျတိုကျ အုပျခြုပျလာခဲ့
"မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တှဆေုံ့ စညျးရုံးမှုတှကေနေ ကြှနျတျောတို့ ကှနျရကျတှကေ မွပွေငျစညျးရုံးရေးတှေ နှဈပေါငျးမြားစှာ လုပျလာခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ အခု လူမှုကှနျရကျမီဒီယာကို သုံးတာက မဲပေးမယျ့ သူတှဆေီရောကျဖို့ အတိုကျအခံတှအေတှကျ ပိုအခှငျ့အရေးရသလို သာတူညီမြှ ယှဉျပွိုငျ နိုငျစတေယျ " လို့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ အမတျအဖွဈအရှေးခံမယျ့ အစိုးရအဖှဲ့ ဝါရငျ့ဝနျကွီး ခြီဟှနျတာ့ က လညျး ဘီဘီစီကို ပွောခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့ နိုငျငံရေးကိစ်စတှမှေအပ အားလုံးကိုခွုံကွညျ့လိုကျရငျ လူထုတှဆေုံ့ မဲဆှယျပှဲတှေ မလုပျနိုငျတာက အခွား အခကျအခဲတှကေို လညျးဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
"ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျပှဲ တဈခုလုပျရငျ နားထောငျမယျ့လူက သူ့အိမျကနေ ပှဲရှိတဲ့နရောကိုလာပွီး ဟောပွောတာကို တဈနာရီလောကျ နားထောငျဖို့ အခြိနျရတယျ" လို့ သူတို့ပါတီရဲ့ အှနျလိုငျး တှဆေုံ့ပှဲတှကေို စီစဉျနတေဲ့ ပီအကျဈပီပါတီဝငျ မစ်စတာတနျက ဆိုပါတယျ။
" လူကိုယျတိုငျ တကျရတဲ့ မဲဆှယျပှဲတှမှောဆိုရငျ ကိုယျပွောမယျ့ မိနျ့ခှနျးက အစပိုငျးမှာ ဘယျလိုစရမယျ၊အလယျမှာဘယျလိုပွောရမယျ၊ အဆုံးကရြငျ ဘယျလို အဆုံးသတျရမယျဆိုတာ ခငျဗြားသိတယျ။ ဒါပမေဲ့ အှနျလိုငျး မဲဆှယျပှဲတှကေတြော့ လူတှစေိတျဝငျစားဖို့ အစပိုငျး ၁၅စက်ကနျ့မှာတငျ ဆှဲဆောငျရတာလို့ " လညျး သူက ဘီဘီစီကိုပွောခဲ့ပါတယျ။
ပွီးတော့ အစပိုငျးမှာ စိတျဝငျစားအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျရငျခဲ့တယျ ဆိုရငျတောငျ ဒါကိုဆကျထိနျးသှားဖို့ ကွိုးစား ရပါတယျ။
"အှနျလိုငျးမှာ တဈခြိနျတညျး ပါတီငါးခု မဲဆှယျတာနဲ့သှားတှနေို့ငျလို့ မကွာခဏ လိုငျးပွောငျးနရေတာ နဲ့လညျး ကွုံရနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ စိနျချေါမှုက ပရိသတျ စိတျဝငျစားလာအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲဆိုတာပါလို့ "မစ်စတာတနျက ပွောပါသေးတယျ။
ဖစျေ့ဘုချတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့မှုကနေ မဲဆှယျနတေဲ့ အမတျလောငျးတှေ
အသဈနဲ့ အဟောငျး ရောထှေးမှု
ဥပမာအားဖွငျ့ နောကျထပျ အခကျအခဲတဈခုကလညျး နညျးပညာအားနညျးတဲ့ အှနျလိုငျးမသုံးနိုငျတဲ့ အသကျကွီး ပိုငျးလူတှကေို ဘယျလို ဆကျသှယျမှုလုပျမလဲဆိုတာပါ။
"ကိုယျပွောခငျြတာ ကိုယျလုပျခငျြတာအားလုံးကို ထုတျပွောလို့ရပါတယျ။ ပွဿနာက ကိုယျပွောခငျြတဲ့ လူတှဆေီ လူမှနျနရောမှနျ ‌ရောကျအောငျ လုပျဖို့က ခကျတာ။အဲ့ဒီလူက နိုငျငံရေး စိတျဝငျစားတဲ့ လူတဈယောကျမဟုတျဘူးဆိုရငျ အဲ့ဒီ ကွောငွာတှကေ ဖဘေု့ချဖှငျ့တာနဲ့ ပျေါလာမှာ မဟုတျပါဘူး" လို့ မစ်စတာတနျက ဆိုပါတယျ။
အဲ့ဒီ အခကျအခဲကို ကြျောလှားနိုငျဖို့ သူတို့အုပျစု စီစဉျထားတာက သူတို့ လကျကမျးကွျောငွာတှကေို သူတို့ အှနျလိုငျး စာမကျြနှာတှပေျေါမှာ တငျသှားဖို့ပါ။
zoom ဇှနျးကနေ မဲဆှယျဖို့ ပီအကျဈပီပါတီက လကျကမျးကွငွောတှေ အှနျလိုငျးကနဖွေနျ့ဝေ
" လူတှဆေီ တိုကျရိုကျရောကျဖို့ လကျကမျးကွျောငွာတှကေို ကြှနျတျောတို့ ဖစျေ့ဘုချစာမကျြနှာကနေ ဖွနျ့ဝသှေားမယျ။အဲ့ဒီကနေ လူခငျြးတှဖေို့ ဇှနျး Zoomကိုသုံးပွီး လုပျသှားမယျ။ နောကျပိုငျး လုပျခဲ့တဲ့ ဆနျးစဈလလေ့ာခကျြတဈခုအရ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဇှနျးမဲဆှယျပှဲတှကေို လူ၆၀ရာခိုငျနှုနျးက လကျကမျးကွျောငွာ ကတဈဆငျ့ သိသှားကွတယျ " လို့ သူကပွောပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီလိုလုပျနတောက အစဉျအလာနညျးလမျးတှကေိုတော့ မကျြကှယျပွုလို့မရသေးပါဘူး။
အခုအခြိနျထိ အမတျလောငျးတှကေ အိမျတံခါးပေါကျအထိသှားပွီး စညျးရုံးတာတှေ လုပျနရေဆဲပါ။ ဒါပမေဲ့ သတျမှတျထားတဲ့ လူဦးရနေဲ့ ခပျခှာခှာနတေဲ့ စညျးမဉျြးကိုတော့ လိုကျနာရပါတယျ။
ပီအကျဈပီ ပါတီရဲ့ အိမျတံခါးခေါကျ မဲဆှယျလှုပျရှားမှုတဈခု
"အိမျတံခါးခေါကျ တှဆေုံ့မှုတှမှော ခပျခှာခှာနတေဲ့ စညျးမဉျြးတှကေို လိုကျနာပွီး လူ၅ယောကျ ထပျပိုပွီးမသှားကွသလို နတေဲ့အိမျကလူတှရေဲ့ အကြိုးကိုကွညျ့ပွီး သူတို့နဲ့ ပွောဆို တာတှကေိုလညျး အတိုခြုပျလုပျပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ အိုငျတီနညျးပညာနဲ့ ဝေးတဲ့ အသကျကွီးတဲ့သူတှအေတှကျ အှနျလိုငျးတှေ့ ဆုံမှုက မကျြနှာခငျြးဆိုငျတှဆေုံ့မှုနရောမှာ အပွညျ့အဝ အစားထိုးလို့ မရသေးတဲ့အတှကျ လူခငျြး တှေ့ ဆုံမှုတှေ ဆကျလုပျနရေတာပါ။ "လို့ ပီအပေီပါတီ အမတျလောငျး မစ်စတာခြီက သူ့တို့ လုပျနတောတှကေို ပွောပါတယျ။
အှနျလိုငျးဝနျဆောငျမှုက လူကိုယျတိုငျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး ပွောရတာလောကျ အပွညျ့အဝ မစှမျးဆောငျနိုငျဘူးလို့ ဆိုပမေဲ့ ရှိနတေဲ့ အခွအေနမှောပဲ အကောငျးဆုံး လုပျဆောငျနိုငျတာတှေ လုပျနရေပါတယျ။
"အခုဆို မဲဆန်ဒရှငျတဈယောကျက အမတျလောငျးနဲ့ တှဆေုံ့နိုငျဖို့ အကနျ့အသတျတှရှေိသှားပွီ၊ လကျဆှဲ နှုတျဆကျတာတှေ လုပျလို့မရတာက ကိစ်စကွီးတဈခုမဟုတျပမေဲ့ လူကို သသေခြောမမှတျမိတာကတော့ ပွဿနာတဈခု ဖွဈနပေါတယျ "လို့ မစ်စတာတနျက ဆိုပါတယျ။
"မကျြနှာဖုံးတပျထားတဲ့ လူတခြို့ကို တှရေ့ငျ ခငျဗြား မှတျမိဖို့ ခကျသလို ဒီအမတျလောငျး ဘယျသူ လဲဆိုတာကိုလညျး အှနျလိုငျးမှာ မှတျမိဖို့မလှယျပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီနညျးလမျးက မဲဆှယျ စညျးရုံး ရေး အတှကျ ကွိုကျတဲ့ နညျးလမျးမဟုတျပမေဲ့ လူတှလေုံခွုံရေးရှိဖို့ အဓိက ပထမဆိုတာကိုတော့ နောကျဆုံးမှာတော့ လကျခံရမှာပါ။"လို့သူကပွောပါတယျ။
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်မရတဲ့ စင်ကာပူ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှု
နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ ဆိုတာဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိတဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ထဲက အချိန်ကာလ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူတွေက သူတို့ကို မဲပေးကြဖို့ကိုလည်း သူတို့က ဆွဲဆောင် စည်းရုံးရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးရောဂါကြီးက ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုလည်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အွန်လိုင်းကပဲ လုပ် ၊ တစ်အိမ်တက်ဆင်း မဲဆွယ်တဲ့နေရာမှာ ခပ်ခွာခွာ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ့်အစား အခြားနည်းနဲ့ နှုတ်ဆက်တာတွေကိုပဲ လုပ်ရမယ့် အခြေအနေ ရောက်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ် ဇူလိုင် ၁၀ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် စင်ကာပူအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကလည်း အထက်မှာ ပြောတဲ့ အခြေအနေတွေ အောက်မှာ ကျင်းပဖို့ ဖြစ်လာပါပြီ။
ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့ အိပ်ဆောင်တွေကနေ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု အများဆုံးဖြစ်နေပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူ လေးသောင်း လေးထောင်ကျော်ရှိနေတဲ့စင်ကာပူမှာ လာမယ့် သောကြာနေ့ကြရင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတော့မှာပါ။
ဒီလအစောပိုင်းက စင်ကာပူမှာ လော့‌‌‌ဒေါင်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လျှော့ချထားပေမယ့် ခပ်ခွာခွာ နေရမယ့် စည်းမျဉ်းတွေကိုတော့ ဆက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားဆဲပါ။ လူတွေတ‌စ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်မီတာ အနည်းဆုံးခွာနေခိုင်းထားပြီး ၊ လူစုလူဝေးနဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေကိုလည်း ပိတ်ပင်ထား ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကပ်ရောဂါကြီးကြားက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေ ဘယ်လိုလုပ်နေကြပါသလဲ။
‌ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်လောင်းတွေအတွက် သူတို့ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားတွေ ပေးနိုင်ဖို့ လူထု တွေ့ဆုံစည်းဝေးပွဲတွေ လုပ်တာက မဲဆွယ် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံပါတီ ၁၂ပါတီထဲက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စပြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူ ပြည်သူ့တိုးတက်ရေး ပါတီ (ပီအက်စ်ပီ)ကလည်း ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ ၁၉၆၅ခုနှစ်ကတည်းက ဆက်တိုက် အနိုင်ရ အုပ်ချုပ်လာတဲ့ ပြည်သူ့ လှုပ်ရှားမှုပါတီ (ပီအေပီ) ကိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ ယှဉ်နိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။
လူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ မဲဆွယ်ပွဲတွေကို ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုပ်ခွင့်မရတာက သူတို့အတွက် ထိခိုက်မှုတွေ အများကြီးဖြစ်စေသလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ကြားမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတာကလည်း "လူတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်" လို့ ပီအက်စ်ပီ ပါတီဝင် တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
. "အတိုက်အခံတွေရဲ့ မဲဆွယ်ပွဲတွေက လူတွေကို မက်လုံးကြီးကြီးပေးပြီး မဲဆွယ်ကြတာ၊လူတွေ အများကြီး လာတက်ကြသလို ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း အများကြီးဖန်တီးပေးပါတယ်" လို့ လီရှန်ယန်း က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ လူထုမဲဆွယ်ပွဲတွေ လုပ်ခွင့်မရတာက အတိုက်အခံတွေကို နစ်နာစေတယ်" လို့ လည်း စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ပီအေပီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင် လီရှန်လွန်းရဲ့ညီ လီရှန်ယန်းက ထပ်ဖြည့်ပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံ မဲဆွယ်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင် ခန့်မှန်းခြေ လူသုံးသောင်းလောက် တက်ခဲ့တာကြောင့် စင်ကာပူ လူဦးရေ ငါးသန်းနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် များပြားတဲ့ ပမာဏလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းကိုပဲ အကြီးအကျယ် အားကိုးနေရတာ ဖြစ်လို့ အခွင့်အရေး ညီတူမျှတူ ရစေတယ်လို့ ပီအေပီပါတီက လွှတ်တော် အမတ်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။
"မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ စည်းရုံးမှုတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ရက်တွေက မြေပြင်စည်းရုံးရေးတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အခု လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာကို သုံးတာက မဲပေးမယ့် သူတွေဆီရောက်ဖို့ အတိုက်အခံတွေအတွက် ပိုအခွင့်အရေးရသလို သာတူညီမျှ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စေတယ် " လို့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်အဖြစ်အရွေးခံမယ့် အစိုးရအဖွဲ့ ဝါရင့်ဝန်ကြီး ချီဟွန်တာ့ က လည်း ဘီဘီစီကို ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှအပ အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင် လူထုတွေ့ဆုံ မဲဆွယ်ပွဲတွေ မလုပ်နိုင်တာက အခြား အခက်အခဲတွေကို လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
"ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပွဲ တစ်ခုလုပ်ရင် နားထောင်မယ့်လူက သူ့အိမ်ကနေ ပွဲရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီး ဟောပြောတာကို တစ်နာရီလောက် နားထောင်ဖို့ အချိန်ရတယ်" လို့ သူတို့ပါတီရဲ့ အွန်လိုင်း တွေ့ဆုံပွဲတွေကို စီစဉ်နေတဲ့ ပီအက်စ်ပီပါတီဝင် မစ္စတာတန်က ဆိုပါတယ်။
" လူကိုယ်တိုင် တက်ရတဲ့ မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာဆိုရင် ကိုယ်ပြောမယ့် မိန့်ခွန်းက အစပိုင်းမှာ ဘယ်လိုစရမယ်၊အလယ်မှာဘယ်လိုပြောရမယ်၊ အဆုံးကျရင် ဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်း မဲဆွယ်ပွဲတွေကျတော့ လူတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ အစပိုင်း ၁၅စက္ကန့်မှာတင် ဆွဲဆောင်ရတာလို့ " လည်း သူက ဘီဘီစီကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အစပိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ရင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ဒါကိုဆက်ထိန်းသွားဖို့ ကြိုးစား ရပါတယ်။
"အွန်လိုင်းမှာ တစ်ချိန်တည်း ပါတီငါးခု မဲဆွယ်တာနဲ့သွားတွေ့နိုင်လို့ မကြာခဏ လိုင်းပြောင်းနေရတာ နဲ့လည်း ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုက ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာပါလို့ "မစ္စတာတန်က ပြောပါသေးတယ်။
အသစ်နဲ့ အဟောင်း ရောထွေးမှု
ဥပမာအားဖြင့် နောက်ထပ် အခက်အခဲတစ်ခုကလည်း နည်းပညာအားနည်းတဲ့ အွန်လိုင်းမသုံးနိုင်တဲ့ အသက်ကြီး ပိုင်းလူတွေကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်မှုလုပ်မလဲဆိုတာပါ။
"ကိုယ်ပြောချင်တာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာအားလုံးကို ထုတ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြဿနာက ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ လူတွေဆီ လူမှန်နေရာမှန် ‌ရောက်အောင် လုပ်ဖို့က ခက်တာ။အဲ့ဒီလူက နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ ကြောငြာတွေက ဖေ့ဘုခ်ဖွင့်တာနဲ့ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ မစ္စတာတန်က ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ သူတို့အုပ်စု စီစဉ်ထားတာက သူတို့ လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေကို သူတို့ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တင်သွားဖို့ပါ။
" လူတွေဆီ တိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့ လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖေ့စ်ဘုခ်စာမျက်နှာကနေ ဖြန့်ဝေသွားမယ်။အဲ့ဒီကနေ လူချင်းတွေ့ဖို့ ဇွန်း Zoomကိုသုံးပြီး လုပ်သွားမယ်။ နောက်ပိုင်း လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇွန်းမဲဆွယ်ပွဲတွေကို လူ၆၀ရာခိုင်နှုန်းက လက်ကမ်းကြော်ငြာ ကတစ်ဆင့် သိသွားကြတယ် " လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်နေတာက အစဉ်အလာနည်းလမ်းတွေကိုတော့ မျက်ကွယ်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။
အခုအချိန်ထိ အမတ်လောင်းတွေက အိမ်တံခါးပေါက်အထိသွားပြီး စည်းရုံးတာတွေ လုပ်နေရဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူဦးရေနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေတဲ့ စည်းမျဉ်းကိုတော့ လိုက်နာရပါတယ်။
"အိမ်တံခါးခေါက် တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ခပ်ခွာခွာနေတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာပြီး လူ၅ယောက် ထပ်ပိုပြီးမသွားကြသလို နေတဲ့အိမ်ကလူတွေရဲ့ အကျိုးကိုကြည့်ပြီး သူတို့နဲ့ ပြောဆို တာတွေကိုလည်း အတိုချုပ်လုပ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အိုင်တီနည်းပညာနဲ့ ဝေးတဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းတွေ့ ဆုံမှုက မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုနေရာမှာ အပြည့်အဝ အစားထိုးလို့ မရသေးတဲ့အတွက် လူချင်း တွေ့ ဆုံမှုတွေ ဆက်လုပ်နေရတာပါ။ "လို့ ပီအေပီပါတီ အမတ်လောင်း မစ္စတာချီက သူ့တို့ လုပ်နေတာတွေကို ပြောပါတယ်။
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုက လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ပြောရတာလောက် အပြည့်အဝ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပေမဲ့ ရှိနေတဲ့ အခြေအနေမှာပဲ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ လုပ်နေရပါတယ်။
"အခုဆို မဲဆန္ဒရှင်တစ်ယောက်က အမတ်လောင်းနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ အကန့်အသတ်တွေရှိသွားပြီ၊ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်တာတွေ လုပ်လို့မရတာက ကိစ္စကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ လူကို သေသေချာမမှတ်မိတာကတော့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ် "လို့ မစ္စတာတန်က ဆိုပါတယ်။
"မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ လူတချို့ကို တွေ့ရင် ခင်ဗျား မှတ်မိဖို့ ခက်သလို ဒီအမတ်လောင်း ဘယ်သူ လဲဆိုတာကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ မှတ်မိဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနည်းလမ်းက မဲဆွယ် စည်းရုံး ရေး အတွက် ကြိုက်တဲ့ နည်းလမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ လူတွေလုံခြုံရေးရှိဖို့ အဓိက ပထမဆိုတာကိုတော့ နောက်ဆုံးမှာတော့ လက်ခံရမှာပါ။"လို့သူကပြောပါတယ်။